बिग समाचार – Page 39 – BIG FM 101.2 MHz
Home » बिग समाचार (page 39)
विग आईकनलाई एक हप्ते बेलायतको साँगीतिक टुर प्याकेज
रेम बिक पोखरा, १८ बैशाख । पाँचौ सँस्करणको विग आईकनको उपाधी जित्ने विजेताले पुरस्कार संगै बेलायतमा साँगीतिक भ्रमणको अवसर पाउने भएका छन् । विग आईकनका लागि यस्तो व्यवस्था काठमाण्डौस्थित ब्रिटिश कलेजले गर्न लागेको हो । विग एफएमका अध्यक्ष महेश भण्डारीले विग आईकनको एक हप्ते साँगीतिक बेलायत भ्रमणका लागि कलेजसंग सहमती गरेका छन् । सहमतीपत्र अनुसार ब्रिटिश कलेजले यो सँस्करणको विग आईकनका …
पाँचौ बिग आइकन २०१४ को टेलिभिजन पार्टनर ‘एभिन्यूज टेलिभिजन’
काठमाण्डौं, १८ वैशाख पश्चिमाञ्चलको नम्बर १ एफ एम बिग एफ एम १०१.२ मेगाहर्जले यो वर्ष आयोजना गर्न लागेको पाँचौ बिग आइकन २०१४ को टेलिभिजन पार्टनरको रुपमा राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ न्यूज च्यानल ‘एभिन्यूज टेलिभिजन’ आबद्ध भएको छ । बिग एफ एमका अध्यक्ष श्री महेश भण्डारी र एभिन्यूज टेलिभिजनका मोर्केटिङ एण्ड सेल्स डाइरेक्टर श्री संजीब प्याकुरेलबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई आज सहमती भयो …
पाँचौ बिग आइकन २०१४ को बजार पार्टनर ‘९९ बिग बजार प्रा. लि.’
admin बिग समाचार
पोखरा, १७ वैशाख / पाँचौ बिग आइकन २०१४ को बजार पार्टनरको रुपमा पोखरामा हालै आफ्नो सेवा सुरु गरेको चर्चित ‘९९ बिग बजार प्रा. लि.’ आबद्ध भएको छ । बिग बजारका अध्यक्ष विवेक उपाध्याय र बिग एफ. एम. का मार्केटिङ अफिसर बिकास अधिकारीबीच आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई सहमती भयो । सहमती पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बिग बजारका अध्यक्ष विवेक उपाध्यायले बिग …
विग एफएमको कलर्स गुडलकमा सात जनाले जिते कलर्स मोबाईल
रेम बिक, पोखरा, ८ बैशाख । विग एफएमको आयोजनामा भएको नयाँवर्ष विशेष ईभेन्ट ‘कलर्स गुडलक ०७१’ मा सात जनाले कलर्स मोबाईल जितेका छन् । सात दिन सम्म चलेको रेडियो गेम शो अन्तरगत सोधिएको सहि प्रश्न दिएको आधारमा उनीहरुले मोबाईल जितेका हुन् । मोबाईल जित्नेहरुमा पुजा बाँस्तोला, प्रमिला गुरुङ, प्रतिक्षा बाँस्तोला, रामप्रसाद गौतम, तारा सुवेदी, सोचिव भुर्तेल र सुवास रहेका छन् । हरेक …
विग आईकनको सब टाईटलमा नेरोल्याक पेन्ट्स
रेम बिक, पोखरा, २ बैशाख । विग आईकनको पाँचौ सँस्करणको लागि कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्स सब टाईटलमा फाईनल भएको छ । मंगलबार विग एफएमका अध्यक्ष महेश भण्डारी र नेरोल्याक पेन्ट्सका कन्ट्री हेड सत्य प्रकाशले सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सब टाईटल फाईनल गरेका हुन् । पाँचो सँस्करणको विग आईकनको लागि यस अघि नै सामसुङ मोबाईल मुख्य प्रायोजकमा फाईनल भैसकेको छ ।‘विग आईकनको देशव्यापी प्रभाव देखेर …
बिग एफएमको नयाँ वर्षे ईभेन्ट ‘कलर्स गुडलक ७१’ शुरु
रेम बिक पोखरा, १ बैशाख । नयाँवर्षको अवसरमा विग एफएमले वर्षेनी गर्दै आएको रेडियो गेम शोको पछिल्लो सँस्करण ‘गुडलक ७१’ शुरु भएको छ । नयाँ वर्षकै दिनबाट शुरु भएको ईभेन्ट एक सातासम्म चल्ने एफएमले जनाएको छ । कलर्स मोबाईलले ईभेन्टलाई मुख्य प्रायोजन गरेको छ । कलर्सले अघिल्लो वर्ष पनि ईभेन्टको मुख्य प्रायोजन गरेको थियो । एक सातासम्म चल्ने ईभेन्टमा हरेक …
पाचौ विग आईकनलाई पुन: सामसुङ मोबाईलको साथ
गोकुल बानियाँ पोखरा, १६ चैत । नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको गायन प्रतियोगिता ‘विग आईकन’ लाई यस पटक पनि सामसुङ मोबाईलले साथ दिने भएको छ । पोखराको बिग एफएमले स्थापनाकालदेखि आयोजना गर्दै आएको विग आईकनको पाचौ संस्करणमा पुनः सामसुङ मोवाईल मुख्य प्रायोजक हुने पक्का भएको छ । सामसुङ मोबाईल नेपालको अधिकृत विक्रेता आईएमएस र विग एफएमबिच पाचौ विग आईकनको लागि सहमती भएको हो …
पाचौ विग आईकनलाई पुन ः सामसुङ मोबाईलको साथ
गोकुल बानियाँ पोखरा, १६ चैत । नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको गायन प्रतियोगिता ‘विग आईकन’ लाई यस पटक पनि सामसुङ मोबाईलले साथ दिने भएको छ । पोखराको बिग एफएमले स्थापनाकालदेखि आयोजना गर्दै आएको विग आईकनको पाचौ संस्करणमा पुनः सामसुङ मोवाईल मुख्य प्रायोजक हुने पक्का भएको छ । सामसुङ मोबाईल नेपालको अधिकृत विक्रेता आईएमएस र विग एफएमबिच पाचौ विग आईकनको लागि सहमती …
Pre Booking Open for Samsung Galaxy S5
International Marketing Services Pvt Ltd, the authorized distributor of Samsung mobiles in Nepal, has opened the pre-booking for the latest phenomenon in the global market—Samsung Galaxy S5. This hottest sensation from Samsung has already created lots of buzz in the world marketas the most coveted smartphone in the recent times. The pre-booking for the smartphone has been opened from March …
विग आईकनमा पुनः सामसुङ मोबाईल, फाराम खुल्ला
रेम बिक पोखरा, १५ चैत । नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको गायन प्रतियोगिता ‘विग आईकन’को पछिल्लो सँस्करणको मुख्य प्रायोजकको रुपमा सामसुङ मोबाईल फाईनल भएको छ । सामसुङ मोबाईल नेपालको अधिकृत विक्रेता आईएमएस र विग एफएमबिच यो कुराको सहमती भैसकेको छ । सामसुङ मोबाईलले विग आईकनलाई मुख्य प्रायोजन गरेको यो तेस्रोपटक हो । मुख्य प्रायोजकको रुपमा सामसुङ मोबाईलका लागि नेपालको अधिकृत …